En vente actuellement 30/10/2018
Voam-boatavo, azo isorohana ny aretin’ny fo sy lalan-dra
Tsy voatery ariana ny voana voatavo. Voalaza tao anatin’ny fandaharana “Taiza vatana” omaly, tao amin’ny Top Radio fa mahasalamana, misoroka ny homamiadana no sady mitondra soa maro izy ireny. Indro ny fikarakarana ireo voana voatavo ireo.
90 andro izao no tsy nikitika zava-mahadomelina intsony i Demi Lovato.
1. Ny volana jolay lasa teo mantsy izy no nampidirina hôpitaly vonjimaika noho ny fidorohana zava-mahadomelina tafahoatra.
Alarobia : Voatavo sy henabaolina – 8.000Ar
Akora ilaina · Voatavo 2.000 Ar · Toton-kena ½ kg – 5.500 Ar
Manamafy ny hoza-damosina sy ny fitombenana
Faritra ma adino ao anatin’ny fikoloam-batana ny lamosina, kanefa tena tsara hamafisina matetika tokoa ny hozatra ao atetikaminy.
“Sésame” : mahatsara volo sy tarehy, miaro amin’ny diabeta
Sady tsara ho an’ny fahasalamana no tsara ho an’ny endrika sy bika ny “sésame’. Ny menaka “sésame” sy ny voany dia manan-karena otrikaina mahatsara ny hoditra sy ny volo. Miaro amin’ny aretina samihafa toy ny homamiadana, ny diabeta sy kolesteroly koa anefa izy ary mampidina ny tosi-dra koa.
Indonezia : Boeing 737 nianjera tany an-dranomasina
Fiaramanidina Boeing 737 iray, an’ny kaompaniam-pitaterana an’habakabaka Lion Air no nianjera tany an-dranomasina tamin’ny alatsinainy lasa teo raha vao avy niainga fotoana fohy
Ankizy lahikely 7 taona nijery horonan-tsary mamoafady, nanolana ny mpiara-mianatra
Zazavavikely iray vao 6 taona no nararaotin’ireo namany, ankizilahikely anankiroa, izay samy 7 taona avy tao amina sekoly ambaratonga fototra iray any Aostralia.
Mangataka fanamelohana ho faty ho an-drainy ny zanany
Mpirahavavy miisa 3 no nanangona Sonia ho fangatahana fanamelohana ho faty ho an’ny rainy izay namono ny reniny tany Korea.
Niaraka tamin’olona nandritra ny 3 taona aho.
Niafina foana izahay tamin’izany satria hoe : mbola kely, hono. Nampirafy ahy ihany izy nandritra ny 2 taona voalohany niarahanay, saingy nifona foana rehefa tratrako dia namela azy aho.
« Trouve un endroit à l’intérieur de toi ou il y a de la joie et utilise cette joie afin de brûler ta douleur ». Joseph Campbell
Ny olombelona hono tsy nohariana ho ratsy, fa ny tontolo iainany sy ivoarany no manova azy tsikelikely. Rehefa mandinika tokoa dia tahaka ny mitovitovy fomba fijery, mitovitovy fitondran-tena ny ankizy any am-boalohany.